I-WPS Office Beta ye-LINUX. | Kusuka kuLinux
nxumabiyela | | Aplicaciones, I-GNU / Linux
I-WPS Office futhi wazi njenge Ihhovisi laseKingsoft yinkampani yaseChina eba nehhovisi lehhovisi elinendawo efana naleyo ye- Ihhovisi le-MS. Ihhovisi le-WPS likhululekile kodwa lingumthombo ovaliwe. Inkampani yaseChina ithathe isinqumo sokungena I-GNU / Linux nehhovisi labo suite.
Kuze kube manje inkampani ihlinzeka ngenguqulo ye-BETA ye- I-GNU / Linux ngobuciko be-32-bit, obungasetshenziswa futhi I-GNU / Linux Ngokwakhiwa okungama-64-bit, itholakala ngesiShayina nangesiNgisi.
Mina ngokwami ​​ngenxa yelukuluku ngiyifakile ukubona ukuthi imvelo yale suite ibinjani I-Linux Mint 14 ngobuciko obungu-64-bit. Ngikushiya ividiyo engiyilayishe ku-Youtube, ukuze ukwazi ukubona imvelo yeBETA ye I-WPS Office.
Landa i-WPS Office
Faka iWPS Office ku-Ubuntu noma i-Linux Mint ngobuciko obungu-64-bit
Lapho iphakethe le-WPS Office selilandiwe, sivula i-terminal nendawo.
le mitapo yolwazi izosivumela ukuthi sisebenzise iWPS Office ku Ubuntu, I-Linux Mint, Fedora y I-OpenSuse ngobuciko obungu-64-bit. Ngemuva kwalokho sifaka uhlelo nge-GDebi ngesandla.
Shintsha ulimi usuke esiNgisini uye esiNgisini
Sivula ihhovisi le-WPS bese siyalivala. Ngemuva kwalokho sivula ukuphela bese sibhala:
Bese umusho olandelayo:
Sengiphetha, ngicabanga ukuthi kuhle ukwazi ukuthi i-GNU / Linux iyaqina e-Asia. Ihhovisi le-WPS lingumthombo ovaliwe, kepha kungenye futhi indlela eqondiswe esikhathini esizayo yabasebenzisi be-GNU / Linux.
Kuhle futhi ukubona umncintiswano wokuthuthukisa amasudi asehhovisi kuwo I-GNU / Linux. Vele umuzwa wami uzohlala unesoftware yamahhala, okungukuthi, i-LibreOffice, iCalligra, i-AbiWord, njll. Banganikeza imibono yabo eyakhayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-WPS Office Beta ye-LINUX.
Amazwana ayi-80, shiya okwakho
Anginaso isiqiniseko sokuthi kungaba umncintiswano wamahhovisi akhona eGnu / linux, ngoba ngalokho kuzofanele kuthandwe phakathi kwabasebenzisi, kepha kuyathakazelisa ukubona ukuthi izinkampani zifuna ukungena ku-Gnu / linux.
Yebo, angazi noma lokho kuduma kwenkulumo kufanelekile ukuphawula kokusetshenziswa ... Uma kusetshenziswa eChina, izigidi ezimbalwa ezizoyisebenzisa ...
Ngiyizamile emafasiteleni futhi kufanele ngisho ukuthi ngemuva kokuhlukumezeka kolimi, kuyisimo sangempela sehhovisi 2010 (kepha ungabeka izinkinobho ngesitayela sika-2003), futhi kusebenza ngokumangazayo, ukuhambisana ne-docx, xlsx, ne-pptx kuhle kakhulu
Ukube nje bekuseSpanishi ...
Le software "idumile" ku-Android, ngakho-ke lokhu kungaba isango lakho.
Angicabangi ukuthi izodla imakethe, kepha mhlawumbe izoyicindezela ngokwanele ukuze iLibreOffice ingaphumuli kokuzethemba
Ngizonamathela kusixhumi esibonakalayo seLibreOffice 😀
Angiqondi ngempela labo abasebenzisa amahhovisi amahhala
Kubukeka kukuhle! Uma ngolunye usuku bekhipha iphekhi yolimi yeLinux, ngeSpanish, ngiyayifaka 🙂 bese ngisusa i-libreoffice
Ngivumelana nawe. Ngaphezu kwalokho, ngithemba ukuthi iLibreOffice ithuthukisa ukuhambisana kwayo nemibhalo yeHhovisi.
I-Kingsoft officce isebenzisa izichazamazwi ze-LO.
Usho ukuthini ngokusebenzisa izichazamazwi ze-LO, okungukuthi, kungenzeka ukulanda isichazamazwi ukulungisa imibhalo ngeSpanishi ???
Ngiyisebenzisa ku-Android futhi inkulu kakhulu, kepha ngiyishiya lapho, angicabangi ukuthi ngizoyifaka ku-PC 🙂
kungenye yezindlela ezingcono kakhulu ku-android, ezingcono kakhulu kunehhovisi lami elithandekayo elisheshayo
Ku-Archlinux ungayithola ku-AUR njenge-wpsforlinux, okungenani kubukeka kuyindlamu yehhovisi 2007, kuzoba yisikhathi sokuyihlola ngokuhambisana kwefomethi ukubona ukuthi injani.
O, kubukeka kukuhle kimi angikaze ngiyithande indlela ebukeka ngayo i-openoffice / libreoffice yize ngicabanga ukuthi angizoyishintshela kuma-google docs okuyintandokazi yami manje>.
Ngiyithanda impela leyo yebo, kepha… umthombo ovaliwe nesoftware yamaShayina? WTF !! , hhayi ihlaya ngisebenzisa lokho.
Sengivele ngenze indlela encane futhi ngiyakuqinisekisa ukuthi i-Libreoffice ingcono kunale, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngokuhambisana kwefomethi, ayikwazi ngisho nokuvula amafomethi e-OOXML, into eyenziwa yiLibreoffice. Engivumelana nakho ukuthi iLibreoffice kuzofanela iguqule ukubukeka kwayo, ngoba iyi-software enhle.
HA HA HA HA HA HA HA! Okufanayo ngisho. Whoops, shiya lokho ...
la maShayina, enza amakhophi azo zonke izinto….
Icala leMicrosoft ngo-3 .. 2 .. 1 ..
BangamaShayina, akukho okuncane abangakwenza! i-xD
U-Elav…. ICorel Word Perfect .. esikhathini esedlule bekufanele ngibe nesigwebo …… Ngicabanga ukuthi ngiyikopisha kangcono eHhovisi …… .. http://www.muypymes.com/wp-content/uploads/2012/12/corel-office.png .
UCorel akayona inkampani encane.
ICorel WordPerfect nguyisemkhulu weMicrosoft Word. I-WordPerfect yathandwa engxenyeni yesibili yama-80's, kwathi ekuqaleni kweminyaka yama-90, iMicrosoft Word yakudlula ngokuhambisana nedeskithophu yakudala yeWindows emuva ngaleso sikhathi. Kusukela ngalowo mzuzu kuqhubeke, uLizwi nawo wonke amanye ama-Office suite ahlanganisiwe ngenxa yesikhombimsebenzisi sabo esakhiwe kahle uma kuqhathaniswa nokwanela okudala okushiwo yi-GUI ye-WordPerfect.
Uma iMicrosoft imangalela amaShayina, amaShayina abatshela ukuthi, "Kulungile, sikhokhise." Noma kubengcono uma bebephatheke kabi kangangokuba bathathe i-US. Ingqikithi, ngalokho iMelika ekweleta iChina, angingabazi ukuthi lokhu kukude kakhulu neqiniso ... xD
Yebo, isikhombimsebenzisi sihle kimi, njengoba kushiwo ngenhla ngisisebenzisa ku-Android futhi sibukeka sisihle (ngingasho sanele). uma ihambisana ne-vba ngizojabula !!!!!!
O________O Akungimangazi kakhulu, phela bangamaChina ... XD
Noma kunjalo ngikuthola kuthakazelisa ukuthi amaShayina nabantu abaningi bayathuthuka kwi-GNU / Linux ... Sibaningi futhi sizoba ngaphezulu hehehehe .... Uhlelo lokusebenza luhle, yize okwamanje ngihlala neLibreOffice yami embi kodwa enamandla.
Angifaki isiShayina (noma amanye amazwe obuKhomanisi) isoftware yomthombo noma i-pod evaliwe !!!
Lokho KUFANELE kugcwale amaSpywares futhi kubi.
Kukhona enye isoftware equkethe i-spyware futhi asazi ngayo, futhi ubuntu obunama-plugins amasha nayo yenza okufanayo, i-amazon kuphela.
Uxolo ngobani abasebenzisa ubuntu ngaleso sikhathi i-XD.
@Fenix, angazi ukuthi uthola yini, kepha okwenziwa ama-plugins we-Ubuntu ukwenza usesho ku-Amazon ngendlela esheshayo kunokuthi uma uvula isiphequluli ngendlela yendabuko, nangomehluko omkhulu we-Spyware, lezi zingakwazi YENZA ISINQUMO Uma ufuna ukuyifaka noma cha, okungukuthi, uma ungafuni noma ngubani e-Amazon ukuthi athole "isu lakho elibi O lokunqoba umhlaba" ngoba awazi ukuthi likuphi kwi-PC yakho, khona-ke wena vele ukhiphe ilensi ejabulisayo ne-voila, umlingo wenziwe ...
Inkinga ukuthi akuwona wonke umuntu osebenzisa Ubuntu owazi ukukhipha i-Lens .. futhi kulapho izinto zenzeka, nezinto ze-Gay Porn zivela njengoba ngisanda kufunda kwenye indawo ..
Impela, sibabili ...
Ukube ibingumthombo ovulekile bengingeke ngibe nezinkinga zokuyifaka hahaha
Kungikhathaza kakhulu ukuthi wayengowaseMelika ukwedlula owaseChina, empeleni!
I-LOL…. kuliqiniso ... akekho owaziyo ukuthi iHhovisi leMicrosoft linjani ngaphakathi…. ngenhla ukhokha iMicrosoft…. futhi bakucela ukhiye womkhiqizo, ukuze uqiniseke ukuthi akuwona umkhiqizo ophangiwe.
Uyintshontshile emlonyeni wami ...
Iqiniso ukuthi ushintsho olufanayo lokubukeka belungeke lulimaze i-LO, ngoba le "WPS Office" ibonakala ithatha isikhathi ukuba seSpanish ...
Ngingakhetha ukuthi isekele uhlelo lwezikhumba olubunjiwe kakhulu, ukuze ngamunye akwazi ukunyakaza futhi aguqule ngendlela ayefuna ngayo, ngiyazi ukuthi kunzima, kepha kungaba yindlela enhle!
Ngifunde uGiskard wangikhumbuza ngalabo abakhuluma ngesoftware yamahhala bengazi! i-xD
Ngokuzimisela, sengathi kusuka emazweni obuKhomanisi kuphela bekukhona i-spyware cofcofcofGooglecofcof.
Cha. Kodwa i-CIA ngeke izongiphenya ngoba ngakolunye uhlangothi ngiseceleni kwabo. Bangongxiwankulu nami ngokunjalo. Ngiphinde ngihlale ezweni "elihlangene". Angisona "isitha" sakho. Kepha amaShayina angaba ngenxa yomehluko.
Kunoma ikuphi, ANGISEBENZISI I-CODE SOFTWARE EVALIWE (yanoma yiluphi uhlobo), kepha uma benginganikezwa ithuba lokukhetha phakathi kweyenziwe e-USA nenye eChina (futhi bengingenayo inketho) bengizokhetha eyodwa evela e-USA.
Ngiyethemba ukuthi incazelo yami ikwenze wawuqonda kangcono umbono wami.
Ukusetshenziswa Okukhethwa YiCuba KuneChina? haha bengingakubonanga lokhu,
Haha kodwa-ke hhayi kuphela amazwe obuKhomanisi, yiwona aphenyayo.Khumbula ukuthi amazwe obuKhomanisi aba ngamakhomanisi ukuzivikela emazweni angongxiwankulu, ezimpini nasezimpini ezedlule.
Angisiye waseCuba, mngani wami. Eqinisweni, ngiqhele ngamakhilomitha ayizinkulungwane ezimbili ukusuka kuleso siqhingi.
Ukulungiswa: Cishe ngamakhilomitha ayizinkulungwane ezine.
Lokho kumele kube yi-China Mobile Phone, akunjalo?
Akukho engingakusho kusho
: ukukhwehlela: ukukhwehlela :: Ungangitsheli:
Eqinisweni, ubuhlakani be-gringo buphenya ngisho nezakhamizi zakhona futhi uzosho ukuthi ngeke bakuphenye ngoba uyizwe elihlangene hahaha, futhi i-isp yase-usa izokuhlola ukuze ungalandi okuqukethwe okweqile ku-p2p amanethiwekhi futhi uma wenza njalo azokuqondisa kabusha kulokho ukuthi ufunde imithetho elwa nobugebengu futhi ngeshwa usinciphise isivinini sakho sokuxhuma njengesijeziso.
Uzothi awusebenzisi isoftware yomthombo evaliwe? Ngizokhuluma ngokusetshenziswa okuyisisekelo. I-MP3, RAR, FLASH PLAYER umsindo kuwe noma awuyisebenzisi?
Mayelana nesoftware kuyindlela enhle kulabo abafuduka besuka ku-Windows besiya ku-Ubuntu noma abafuna enye indlela yamahhala ku-Windows, bazovumelana ngokushesha, ngiyayithanda futhi ngizoyincoma!
Uma sizokhuluma nge-spyware, iGoogle Chrome iyinkosi futhi ithandwa kakhulu, kepha njengoba isetshenzisiwe, akukho ongakusho.
Phendula Lutho Ongakusho
Ngeke ngincike kwimvelaphi yonjiniyela. Ngokwendlela yakho, ngingakhetha uhlelo lokusebenza engiluthanda kakhulu. I-Geopolitics kwisoftware ayidwebi lutho (i-spyware ayizange isungulwe eChina).
Uma uphatha imininingwane ebucayi engabeka engcupheni ukuphepha kwamazwe ongxiwankulu, ungalandeli isibonelo sami. Amandla ezitha ahamba phambili ;-).
Hari Kuyaqabukela kusho
Yebo, uma benginika ithuba lokuzikhethela, ngizothula umshini wokubhala wami omdala.
Phendula ku-Hari Kuyaqabukela
lokho yi-yankee kakhulu
Angikufaki lokhu ngisho ngenxa yelukuluku, siyiziphukuphuku noma yini?
Kungani i-office suite idinga ukuxhuma kwi-inthanethi UMA SINGAKABUZI?
Lokhu kukhombisa ukuthi into ebaluleke kakhulu ekuvikelekeni kwekhompyutha ihleli phambi kwekhompyutha.
Hahahaha kubukeka kukuhle, kepha ngigcina i-LibreOffice yami ngiyayithanda futhi iyi-100% isoftware yamahhala, angikayivuli i-LO ukubona i-interface engikwenza kuphela ukusebenza haha ​​😛
mmm okuxakile lokho, ukugijima kwami ​​bekukuhle kakhulu, yize okwamanje ngisebenzisa i-calligraphic yakho konke.
Ngiyalithanda leli suite lehhovisi, linejubane elihlaba umxhwele, ukusetshenziswa kalula, ukusetshenziswa kwezinsizakusebenza kanye nezikhathi zokuphendula ngaphambi kokuthi i-libreoffice ihlaba umxhwele.
Ku-Kubuntu 12.10 x64 yami ngine-LibreOffice 4.0.1 futhi kwezinye izinto ezingasebenzi kahle, ngisebenzisa i-MS Office 2010 engayifaka yi-Playonlinux.
UKUHLELA: Akuvuli izethulo, amaspredishithi aphelelwe yisikhathi futhi okuwukuphela kwento esebenza kahle ngumbhali ... ukukhipha.
Angiqondile ukuzwakala ngokwahlulela, kepha angikufaki lokho esihogweni! Lokho kumele ukuthi kuhlanganise uhlobo oluthile lobuchwepheshe oluqopha abantu ngayo yonke into nekhamera icishiwe ... unakekele 'uma usiqopha ngisho nekhompyutha icishiwe bese belalela izingxoxo. Eshu!
Ukuhambisana ne- .odt njengoba kuthatha? Ngikusho ngoba bengikufake ku-android futhi lutho.
Ngendlela, ngabe kukhona owaziyo nganoma yisiphi isicelo sehhovisi esizisebenzelayo se-Android esihambisana ne .odt njll.? ukuphela kwento engiyitholile kube ngumfundi, kepha ngaphandle kokuhlelwa kokuhlelwa
Kubukeka kukuhle, kepha thina esijwayele ukusebenza neLibreoffice ngeke sikhululeke kangako. Yize kuyizindaba ezinhle ukuthi ukufana kwesikhombimsebenzisi kungaheha abantu abaningi emhlabeni wesoftware yamahhala futhi ekugcineni kube mahhala. Into embi engiyibonayo nge-WPS ukuthi ayisekeli i-.odt noma i-.odp 🙁
Yebo, ngabe kukhona owaziyo ukuthi idla malini? Ngoba uma idlula ama-300 mb noma noma idlula ama-200 mb, ine-spyware, kepha uma kungelona nje uhlelo oluncane olwenza lokho elikushoyo futhi uma hhayi ngeSpanishi ngeke ngiyifake.
Izinqubomgomo ze-Vaio XD yami.
Yize ngicabanga ukuthi isikhombimsebenzisi sayo sinamahloni kakhulu, cishe i-clone ye-office 2007 no-2010.
Mhlawumbe ukube isikhombimsebenzisi sasifana kodwa sinohlobo lwe-gtk noma sasilula kodwa sihlala sihlonipha isistimu ye-chip, bengizoyifaka, futhi akunjalo ngoba isiShayina; empeleni angiyethembi kakhulu i-USA kuneMelika.
ngiyaxolisa bengifuna ukuthi iChina XD.
UMerlin ubona ukuthi uCorel wenzani ngeCorel Word Perfect.… ..
UCorel wenza ngokuya ngemigomo yami i-Office 2010 clone
Kuzoba ngamaShayina noma yini abayifunayo, kepha njengoba ihambisana nama-VisualC ++ macros kumatafula aphezulu, ngiyifaka MANJE 😀
Ngiyabatshela ukuthi ngizama ukusiza ngomphakathi weLibreOffice.
Izolo iphrofayili iye odongeni lweLibreOffice kuGoogle +, futhi ngishicilele le vidiyo.
Kuqhamuke i-quilombo odongeni. Umfana wayecela ukushintsha isikhombimsebenzisi somsebenzisi sibe yiLibreOffice.
Abasebenzisi beLibreOffice bayibize ngokuthi yi-TROLL.
Ngicabanga ukuthi basule okuthunyelwe kwabo.
Kimi kuhle ukubona imibono yabasebenzisi bomphakathi we-GNU / Linux.
UJuan Carlos Navarro kusho
Damn, kusizani ukwamukela uhlelo lwe-offimatic uma umuntu engakwazi ukulithuthukisa, noma ngabe sizokwamukela ukuthi bayasihlola futhi benze uhlelo abazoluthengisa kamuva ngokukhokha amakhodi okuzithandela enziwe ngabantu abayikhulu.
XD Musa ukuyiwela, i-Office beta ye-GNU / LINUX ayilutho ngaphandle kokuxhuma ukugcina ukuhlola lokho esikwenzayo ezweni lamahhala bese senza okuthile okungcono ezweni elizimele.
Phendula uJuan Carlos Navarro
thuthukisa ukukhululeka kwe-intreface bese uyengeza
liphefumulelwe yi-blender: http:http://lh3.ggpht.com/_1QSDkzYY2vc/TEh0OMjuBTI/AAAAAAAABjA/v1ugkEG4IFI/blender-2.53.png
noma kangcono kunale interface
Isicelo sokwenza imibhalo saseChina esixhuma ngendlela engaqondakali ku-inthanethi ngaphandle kokubuzwa, 'mhlophe futhi sifakwe emabhodleleni'
Kuhle kakhulu, ngisho ngoba ngokufaka imithombo ephathelene ne-MS i-WPS ingavula wonke amadokhumende ezwi lami ne-PowerPoint, ngoba leli lakamuva alizange libukeke lilihle ku-libreoffice. Ikhiqize yonke imiphumela, futhi ngaba ne-interface ejwayelekile, empeleni efanayo, ngikwazile ukudala i-pptx elula kakhulu ebukeka ilunge ngokuphelele ehhovisi le-MS, iphelele ukukwazi ukusebenzisa i-linux futhi ithumele umsebenzi kozakwethu wasenyuvesi ngethemba uyazi ukuthi kukhona amawindi XP no-7
Mayelana nomsuka, uma sithi yisiShayina, sicabanga ukuthi isezingeni eliphansi, ngoba kulokhu ngiyisebenzisile ngifuna iphutha futhi angizange ngibe nezinkinga noma ngigodole noma ngishaye uhlelo. Angicabangi ukuthi izinhloli zohlelo, futhi noma ngabe zenzile, iqiniso elimsulwa lokuphequlula nganoma yiluphi olunye uhlelo oluku-inthanethi luyakwenza.
Ihlala ipholishwa eNtshonalanga, ngoba ikhombisa ukuthi yenzelwe lelo siko, ingasaboni iwebhusayithi yayo nekhasi lasekhaya elixhuma kwi-inthanethi kunokuthi likhutshazwe, noma lisebenzise i-firewall uma uzizwa kubhekiwe.
Sikhipha ukuhambisana kwefomethi nokubukeka okwaziwayo (futhi okuhlelekile) njengenzuzo, nokukhawulelwa kolimi njengokubi engithemba ukuthi kuzoxazululwa kungekudala.
Gremy 1987 kusho
Ungaliyeka kanjani ikhasi lasekhaya
Ngisanda kuyifaka ku-PC yami kepha bengivele ngiyisebenzisa ku-android, ngokwazi kwami ​​ukuthi kuyindlela enhle ngoba njengoba sonke sazi, noma sinehhovisi lamahhovisi lamahhala ku-GNU / Linux, abethuli ukuhambisana okufanayo nemibhalo eyenziwe yi-Microsoft Office, futhi kimi ukuthi sengishintshe ngokuphelele ukusebenzisa Ubuntu, ngiba nobunzima lapho ngisebenzisa eminye imibhalo ye-.docx ne-.pptx ne-LibreOffice.
Angisho ukuthi lolu hlelo luphelele nokuthi lungangena esikhundleni seMicrosoft, kepha ukuhlola ukusebenza kwalo nesikhathi kule Sistimu Esebenzayo, ngicabanga ukuthi yilona olusondele kakhulu.
Angiyena umsebenzisi wochwepheshe we-Ubuntu ngakho-ke ungathukwa yilokhu.
Inguqulo entsha ye-WPS noma i-KingSoft ye-Linux iphumile.
Ungayilanda kusuka lapha.
Isithombe senguqulo entsha ye-KingSoft Office Beta ye-Linux
Ngizamile inguqulo yakamuva abayikhiphile futhi inhle kakhulu ngezithonjana ezintsha futhi ungakhetha ulimi lwesiShayina noma lwesiNgisi, kepha angikashintsheli i-LibreOffice baze bakhiphe inguqulo ngeSpanishi ngeke ngiyishintshe konke kepha kuyathakazelisa kakhulu lesi sibuyekezo sakamuva abasikhiphile.
Uma usebenzisa i-LibreOffice 4.0.x ungazama izithonjana engizakhela i-LibreOffice.
Ungabona futhi uzilande kulokhu okuthunyelwe engisanda kukwenza.
Nginemizwa exubile ngijabule ukuthi bathatha i-linux ngokungathi sína kodwa ngokudabukisayo bangakhohlwa umthombo ovulekile futhi bakhululeke
UJose Al… Ngibonile ukuthi abasebenzisi be-Elementary OS basebenzisa i-WPS OFFICE futhi ngibeke i-LibreOffice eceleni futhi bayikhohlwa ngoba i-interface yayo akuyona yesimanje.
Amaphesenti wabasebenzisi abasebancane nawo acabanga kanjalo.
Ngincamela iFreeOffice. Ngingazimisela ukukhokhela lelo Suite.
Ungayifaka kanjani ngeSpanishi. ngiyabonga
Ukulandelwa kukaChavez kushiye ukungazi okuningi kunalokho obekuvele kukhona ezweni lesithathu, ukufunda imibono lapho behlukanisa umkhiqizo ngomsuka wawo kungenza ngibe namahloni. IPhoyinti 1, iKingSoft akuyona inkampani kahulumeni waseChina. Iphoyinti 2, i-MSOficce yathuthukiswa ngabantu abaningi (kufaka phakathi amaShayina). Iphoyinti 3, ukuthi sinayo yini le software ngeSpanishi kuzoya ngokuthi sifuna ukufaka malini njengomphakathi. (http://wps-community.org/download/)
Ukugcinwa kweforamu nokuvuselelwa